Dilal shacab loogu gaystay Muqdishu
MUQDISHU- Weeraro kala duwan ayaa xalay ilaa saaka ka dhacay magalada Muqdishu xarunta Somalia, waxaana lagu beegsaday haween gaaraya saddex labo kamid ah geeriyoodeen halka mid kale soo gaaray dhaawac halis ah.
Kooxo bastoolado ku hubaysan ayaa saaka weerar ka gaystay degmada Dharkaynlay ee gobolka Banaadir, waxayna ku qaadeen labo gabdhood oo walaalo ah, midkood goobta ayay ku dhimatay halka tan kale soo gaaray dhaawac halis.
Lama garanayo sababta loo dilay hablahaasi oo da'dooda lagu qiyaasay 16-18 iyo kooxaha dilka gaystay, balse waxaa weeraradan ku caan ah ururka Shabaab.
Gabdhaahan ayaa lagu kala magacaabaa Fowsiyo Jamaac Xasan oo aheyd hooyo haysta 3 caruur waxayna ku naf-baxday goobta lagu weeraray, halka shankaroon Jamaal Xasan uu soo gaaray dhaawac, iyo sidoo kale wadihii waday mootada ay saarnaayeen.
Dhanka kale dablay hubeysan ayaa xalay Degmada Hodan ee Gobolka Banaadir ku dilay Haweeney 80 Sano jir ah oo lagu magacaabi jiray Cibaado Cabdi Maxamed,waxayna ka mid aheyd ururka haweenka waaxda October.
Goobaha dilalkaasi ka dhaceen waxaa gaaray ciidamo dowladda katirsan kuwaasi oo wada baaritaano kala duwan oo lagu ogaanayo shakhsiyaadka toogashada sameeyay.
Mudooyinkii dambe waxaa magalada Muqdishu caasumadda Somalia kusoo badanayay weerarada qorsheysan ee lala beegsanayo shacabka Somaliyeed iyo mas'uuliyiinta xilalka haya.
​Muqdishu: Qaraxyo xooggan oo ka dhacay Xalane
Soomaliya 26.07.2016. 10:23
MUQDISHU, Somalia- Qaraxyo xooggan ayaa ka dhacay magaalada Muqdishu Caasumadda Somalia kuwaasoo lala eegtay goobo muhiim ah iyadoo aysan jirin ilaa hadda khasaaro rasmi ah oo la shaaciyay.
Gaari qarax lagasoo buuxiyay oo si xoog ah ku socday ayaa lagu dhuftay ...
​Ciidamo qof dil gaystay ku toogtay Muqdishu
Soomaliya 18.05.2016. 11:29
​Muqdishu: Ciidamo fashiliyay qaraxyo la diyaarinayay
Soomaliya 15.05.2016. 00:27
​Weerar lagu qaaday xarunta Boliiska waddooyinka Muqdishu
Soomaliya 09.05.2016. 10:37
Somalia: Xildhibaan dil ka bad-baaday
Soomaliya 26.04.2016. 22:09
​Faah-faahin weerarka Muqdishu
Soomaliya 11.04.2016. 15:31
​Gaari hoobiyaal ku garaacay Muqdishu oo la qabtay
Soomaliya 08.04.2016. 00:51
​15 ku dhimatay Qaraxyada Muqdishu [Sawirro]
Soomaliya 26.07.2016. 13:32